Zimbabwe's Sacked Vice-President Heads for South Africa - allAfrica.com
Emmerson Mnangagwa, who was fired from his government position as Vice President of the country, has left for South Africa via Mozambique, says one of his allies. New Zimbabwe reports that he may be seeking asylum in South Africa.
President Mugabe has blasted his former deputy Cde Emmerson Mnangagwa for sponsoring the disturbances that happened during the ninth Presidential Youth Interface rally in Bulawayo… Read more »
Zimbabwe's sacked vice president has vowed to return, accusing President Robert Mugabe of treating the nation as his "personal property." Mugabe in turn claims Emmerson Mnangagwa… Read more »
Social Media users have reacted with mixed emotions after ex-vice president Emmerson Mnangagwa fled the country "to avoid life threatening situation". Read more »
FIRED Vice President Emmerson Mnangagwa is reported to have been stopped from crossing into Mozambique through the Forbes Border foiled by security details on Tuesday morning,… Read more »
Zimbabwe: Mugabe's Sacked Deputy Heads to South Africa - Report
CHRIS Mutsvangwa, the war veterans national chair and top ally to axed Emmerson Mnangagwa has revealed that the axed Vice President is on his way to South Africa with signs he… Read more »
ISS, 8 November 2017